Ukuphupha nge-wardrobe Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Sifuna ukugcina into ekhabhathini, umzekelo, iimpahla, izinto zokucoca okanye izinto nje esingasoloko sizifuna. Oko kuhlala kuxhomekeke kwindlela esetyenziswa ngayo ikhabethe kunye negumbi elikulo. Ke ngoko, nokuba utolika iphupha malunga nekhabhathi, kuyathakazelisa apho ikhoyo ikhabethe kwaye unokufumana ntoni kuyo.
Kwakhona, jonga ukuba ithini imeko yekhabethe yokuphupha: indala okanye intsha, icocekile okanye imdaka. Konke oku kunokuba luncedo ekutolikeni uphawu lwe "closet".
1 Uphawu lwephupha «ikhabethe» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ikhabethe» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ikhabethe» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ikhabethe» - ukutolikwa ngokubanzi
Kutoliko jikelele lwamaphupha, uphawu lwephupha "ikhabethe" luphawu lwe ulungelelwano y Ukuziva uxanduva. Ukuphupha kunengqiqo elungileyo yovuko ebomini kwaye uyazi ukuba uyisebenzisa njani ngenjongo. Kwakhona, yenza ngononophelo kwaye oku kucinga ngokucacileyo kuyakukuzisela izibonelelo ezininzi. Ke ngoko, kuya kufuneka uqhubeke nokusebenzisa ezi zakhono ebomini bakho kwixa elizayo.
I-wardrobe njengophawu lwephupha nayo inokuvulwa. thintelo yalatha ku el mundo ukuvuka. Ukuphupha kubonakala ngokungathandabuzekiyo kwezi. Oku kunokwenza kube nzima kuwe ukuba uhlakulele ubuntu bakho bokwenyani ngokukhululekileyo.
Ngokwenkcazo ngokubanzi yamaphupha, izithintelo ebomini bokuvuka zinokuvela kumntu othile. Oku kuzama ukuphembelela iphupha kuba ufuna ukulilawula. Ke ngoko, umphuphi kufuneka ajonge ngokusondeleyo kwindawo amngqongileyo kuyo ebomini bokuvuka, ukuba angamazi umntu onamandla kangako. Ngamanye amaxesha, ikhabethe linokubhekisa emzimbeni waphupha ephupheni.
Ukuba umntu ubona ikhabethe, kunye neshelufu, ephupheni lakhe, iphupha liyaboniswa ukuba kufuneka agcine into kwihlabathi elivukayo elifuna ukulilahla okanye ukulitshabalalisa. Iya kuza iluncedo kwakhona kamva.
Le meko yamaphupha inokubonisa ukuba kuya kufuneka ufumane imicimbi yakho yobuqu kunye neyobungcali ngokulandelelana ngokukhawuleza. Ukujongwa ngokusondeleyo kwekhabethe njengophawu lwephupha ngokubanzi kulumkisa ngokuchaseneyo nobuxoki. Ikhabhinethi yamaphupha evulekileyo icebisa abo baphuphayo Atención nabanye abantu. Kuba ayinguye wonke umntu oneenjongo ezintle kuye.
I-closet evaliweyo ephupheni, nangona kunjalo, ifuna ukuba umphuphi azi ukuba kufuneka abe nobubele kwaye ahlalisane nommelwane wakhe. Ukuvula ikhabethe kungabhengeza ukufunyanwa kwangoko njengephupha.
Ukuba ikhabethe licocekile kwaye lizele ephupheni, iphupha elo linokukhangela phambili ekuchumeni, kubunewunewu nakwiiyure ezimyoli. Ingubo engenanto izisa njengomqondiso wokulala. IKummer nentlupheko nayo. Ukuba umntu ophuphayo uthenga ikhabethe elidala ephupheni lakhe, ulonwabo kunye nenzuzo zimlindele kwihlabathi elivukayo.
Uphawu lwephupha «ikhabethe» - ukutolikwa kwengqondo
Isimboli yephupha "ikhabethe" liquka into ekuchazeni ngokwengqondo kwephupha. Ixabisointo iphupha elingathanda ukuyifaka kuyo. Emva kwayo umntu unokufihlwa, eqhutyelwe entliziyweni, okanye umkhwa othandwayo, amaphupha angathanda ukuwugcina kwaye awukhusele.
Ukuba ukuphupha kuvula ikhabethe ephupheni lakho, apho yonke into icoceke kakhulu okanye kwidrowa, ufumana umkhondo ngokusebenzisa i-subconscious yakho ukuba ujongana nemicimbi yakho kunye neemeko kwihlabathi elivukayo. zilungelelaniswe kakuhle Unayo. Unomdla kakhulu kwaye uzele luthando.
I-closet engcolileyo njengophawu lwephupha, nangona kunjalo, ibonisa ngokwengqondo ukuba ukuphupha akunakuhlela kakuhle iimvakalelo zakho. Uhamba phakathi kokulungileyo nokubi kwihlabathi elivukayo.
Uphawu lwephupha «ikhabethe» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba lokomoya lokuchazwa kwephupha, uphawu lwephupha "ikhabethe" lifuna ukuyenza icace iphupha lokuba uyinto kwihlabathi elivukayo phambi kwamehlo abanye abantu. Yigcine ikhuselekile Ndingathanda.